Halala Team of Choice | News24
Halala Team of Choice
NGICELA ungiphe isikhala kwelakho eliphuma phambili ngike ngizwakalise ukujabula kwami ngokuphumelela kweqembu laseMphithi engilikhonze kakhulu iMaritzburg United ukuvika izembe kulesizini ephelile.
Ayikho into ebibuhlungu njengokubona iqembu lidlala elimnandi ibhola kodwa imiphumela iphike ekugcineni. Ngelinye ilanga ngalalela uVictor Molefe ehleli nabahlaziyi bebhola bekhuluma ngayo indaba ye Team Of Choice nengcwenga yebhola kodwa ebelihambisana nesinyama esikhulu ongakaze usibone uma sekufikwa ekushayeni amagoli. Kumele sibabonge kakhulu abadlali ngoba mina ngikholwa ukuthi kube ukuzikhandla kwabo okwenze ekugcineni bathola imiphumela edingekayo nebasize kakhulu. Umphakathi waKwaZulu Natal (ikakhulukazi waseMphithi) othanda ibhola lezinyawo ubuphatheke kabi kakhulu ngoba besesizo sala neqembu elilodwa vo ku PSL okuyi Arrows njengoba noSuthu lungabuyanga. Obekudida kakhulu ukuthi besiphuma ngobuningi bethu siye enkundleni iHarry Gwala uma abafana bedlala ukuyobagqugquzela ukuthi babone indlela esibathanda ngayo noma besenkingeni asibalahlile. Ekigcineni besibuyela emuva sesinyobozela kwesinye isikhathi uze uzisole nokuthi kambe ubuyaphi. Sibongele nabaphathi beqembu kanjalo nabaphathi bedolobha ikakhulukazi uMeya Chris Ndlela ngakho konke abathe bakwenza ekutheni umzabalazo wokugcina iqembu ku Psl ube impumelelo. Kodwa ke ngizothanda ukuphuma eceleni kancane ngasohlangothini lomqeqeshi uMiddendorp ngoba angikholelwa ekutheni kumfanele ukuqeqesha leliqembu. Ngicabanga ukuthi uma lingazimisele ukuphinda lizibone likulesisimo kwisizini ezayo kuzomele kusheshe kutholakale umqeqeshi omusha. Kunabadlali akade engabadlalisi kodwa ububona mabengenile ukuthi kukhona abangakwenzela leliqembu okuhle.
Ngifuna ukuphuma eqhulwini no Abia Nale esaze samemeza ukuthi akamfake kudlalwa ne Ajax kodwa wasiziba ngoba ubeba neminyakazo emihle kabi uma edlala. Into obuyibona ukuthi unenkinga eqondene naye hayi ethinta ukudlala kwakhe. Sambona naku JB emxosha edlala kahle simthanda waze wayomxosha naku Celtic emfica khona. Ngendlela anolaka ngayo uma umbuka enkundleni ethetha ngize ngizibuze ukuthi engabe unjani kubadlali uma beziqeqesha. Sengiphetha nje uRusike uyakude nebhola. Siyabonga kakhulu Maritzburg United­.
Mfanafuthi ‘Jika Pantsula’ Nzuza ESIGINGQINI